I-Richards Bay FC ethubeni lomlando kwi-GladAfrica | Scrolla Izindaba
I-Rich Boys izihola phambili kwi-log ye-GladAfrica Championship kanti ngeSonto kuzobe kuthweswa ompetha bale ligi isicoco. Leli qembu laseKZN lihamba phambili ngamaphuzu amabili kanti ukunqoba kwalo ekhaya libhekene ne-Cape Town Spurs kungenza libe ngompetha be-GladAfrica yango-2021/22.
Ngesizini yango-2016/17, iThanda Royal Zulu yaba iqembu lokuqala ukukhuphuka isuka esigabeni sokuqala yaya esigabeni esiphezulu. Kodwa-ke iThanda ayizange ibambe iqhaza ku-Premiership ngesizini elandelayo.
Badayisela omakhelwane babo indawo, AmaZulu ngaleso sikhathi nawo ayedlala esigabeni sokuqala, aqeda endaweni yesihlanu. Khonamanjalo Usuthu ludayisele i-Rich Boys indawo yalo esigabeni esiphansi.
Namuhla i-Richards Bay FC isalelwe ukuwina kakodwa ukuze ifane neThanda futhi ibe yiqembu lesihlanu elizomela iKZN ku-DStv Premiership ngesizini ezayo. I-Rich Boys inamaphuzu angu-52 kanti i-University of Pretoria (i-Tuks) esendaweni yesibili inamaphuzu angu-50.
NgeSonto i-Tuks izodlala ne-JSD Stars emdlalweni wokugcina we-GladAfrica Championship.
Amaqembu amabili azolandela ompetha beGladAfrika azodlala kuka-play-offs, neqembu elizoba ngumombolo 15, kwiPSL.